Suurtagal Ma Tahay In Dagaal Toos Ahi Dhexmaro Sucuudiga Iyo Iraan | Marsa News
Suurtagal Ma Tahay In Dagaal Toos Ahi Dhexmaro Sucuudiga Iyo Iraan
September 17, 2019 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Sacuudiga iyo IIraan – laba dal oo awood leh – waxay si weyn ugu loollamayaan galaangalka gobolka Bariga Dhexe.
Khilaafkooda u dhexeeyay in muddo ah waxaa sii xumeeyay kala duwanaanshaha madaahibta diinta.
Waxay kala raacsan yihiin labada qeyb ee Islaamka. Iran waxaa u badan Shiico halka Sacuudiga uu isu arko dalka ugu awoodda badan Muslimiinta sunniga ah.
Sannadkii 2003, duullaankii uu Mareykanka hoggaaminayay ee lagu qaaday Ciraaq waxaa xilka looga tuuray Sadaam Xuseen, oo ahaa Carab Sunni ah, kaas oo cadow ay isku ahaayeen Iiraan.
Taas waxay meesha ka saartay awood militari oo Iiraan ay wajeheyso, culeys weynna ku ahaa.
Ka dib kacdoonkii dalalka Carabta ee 2011, wuxuu sababay xasillooni la’aan siyaasadeed oo gobolka oo dhan soo wajahday. Iiraan iyo Sacuudiga waxay taasi u adeegsadeen sii ballaarinta galaangalkooda.
Dalalka la xusikaro waxaa ka mid ah Suuriya, Baxrayn iyo Yaman. Ka dibna waxaa sii xoogeystay shakiga lakala qabo.
Khilaafka istiraatiijiyadeed wuu sii kululaaday, sababtoo ah marka dhinacyo badan laga eego, Iiraan ayaa ku guuleysaneysa hirdanka gobolka.
Dalka Yahuudda wuxuu cabsi ka qabaa sida dagaallamayaasha Iiraan ay taageereyso ee Suuriya ay ugu dhowaatay xuduuddooda, taas oo ah wax aan horey loo arag.
Mala odhan Karaa Waxaynu ku Wajahanahay dagaal toos ah oo dhexmara Sacuudiga iyo Iiraan?